ESI EMEGHE FAỊLỤ RAR NA WINDOWS 10 (2021) - ADỤ
Esi emeghe faịlụ RAR na Windows 10
Filedị faịlụ Archive dị ka .zip, .rar, .7z, .tar, wdg bara ezigbo uru maka ebumnuche na ebumnuche nchekwa. Enwere ike ịkọkọta ọtụtụ faịlụ ma jikọta ọnụ n'otu faịlụ nke nwekwara ebe nchekwa nchekwa zuru oke ma gbochie nsogbu nke iji aka gị na nbudata ma ọ bụ zipụ faịlụ nke ọ bụla. Agbanyeghị, ọ bụghị ụdị faịlụ faili Archive niile nwere nkwado ụmụ amaala na Windows OS. All Windows nsụgharị wepụtara post-1998 na-akwado faịlụ .zip, ya bụ, otu anaghị achọ ngwa ndị ọzọ ma nwee ike ịpị abụọ na faịlụ .zip iji lelee ọdịnaya ya ma wepụ ha, mana otu abụghị eziokwu maka ọzọ faịlụ faịlụ Archive.
Ndị ọrụ Windows enweghị ike imeghe faịlụ .rar ma ga-achọ enyemaka ndị ọzọ. N'ụzọ dị mma, ịntanetị jupụtara na ngwa ndị na-enyere aka imeghe ma wepụ ọdịnaya nke .rar na faịlụ faịlụ ndị ọzọ niile. Mgbe free na-emeghe-isi iyi 7-zip a họọrọ site ọtụtụ ọrụ, ndị ọzọ na-ewu ewu nhọrọ dị ka Uzochukwu , WinRAR , PeaZip , wdg. ọtụtụ na-ejikwa ya. Ọtụtụ weebụsaịtị na-enye ndị ọrụ ohere wepụ faịlụ .rar ha na ntanetị ma budata ọdịnaya ma ọ bụ gbanwee faịlụ .rar faịlụ .zip faịlụ, ụdị faịlụ nke Windows OS na-akwado. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-enye gị a Walkthrough nke ndị a ngwa ma si otú, inyere gị aka imeghe .rar faịlụ gị Windows kọmputa.
Esi emeghe faịlụ RAR na Windows 10?
1. Gaa n'ihu ma gaa na peeji nke nbudata nke ihe ọ bụla e kwuru na mbụ .rar opener. Ọtụtụ n’ime ha nwere ụdị abụọ dị iche iche dị maka sistemụ 32 bit na sistemụ bit 64. Budata faịlụ .exe dabara maka usoro ihe owuwu gị (Njikwa faili> Pịa aka nri na PC a ma họrọ Njirimara iji kwado ụdị usoro gị). Anyị ga-eji 7-zip n'ihi na a nkuzi ma usoro iji ọzọ .rar ngwaọrụ bụ ọzọ ma ọ bụ obere otu.
amd ngosi ọkwọ ụgbọala kwụsịrị ịzaghachi ma gbakee
Mara: Ndị ọrụ nkịtị nwere ike budata & wụnye mbipute n'efu nke otu n'ime ngwaọrụ ndị a edepụtara n'elu, ebe ndị ọrụ toro eto dị elu ndị chọkwara iji ngwaọrụ ndị a maka ịpịkọta faịlụ kwesịrị ịgafe ndepụta atụmatụ ha, tụlee oke mkpakọ, wdg tupu ịzụta na ịwụnye ụdị ndị akwụ ụgwọ.
lelee profaịlụ facebook na-enweghị abanye
2. Ozugbo ibudatara faịlụ .exe nke ngwa ọrụ, Pịa ya ugboro abụọ iji malite nrụnye ọkachamara ma soro ntuziaka ihuenyo iji wụnye ya. Jide n'aka na ị wụnye ngwa na ọnọdụ ya.
3. Ugbu a na anyị awụnyere software achọrọ, anyị nwere ike ịkwaga imeghe faịlụ .rar. Chọta faịlụ .rar, pịa akanri ma họrọ Mepee na> 7-zip site na nchịkọta ọnọdụ ndị na-esote. Ọ bụrụ n’ ịchọta 7-zip na Mepee na menu, pịa Họrọ Ngwa ọzọ ndị sotere Ngwa ndị ọzọ ma chọọ ngwa ọzọ na PC . Nyagharịa ka C: Faịlụ mmemme 7-Zip , họrọ 7zFM.exe wee pịa Mepee.
4. Window 7-zip na-egosipụta ọdịnaya nke .rar faịlụ na ndị ọzọ metadata ndị ọzọ ga-emeghe. Pịa na Wepụ (Site na ndabara, a na-amịpụta faịlụ niile. Ọ bụrụ na ịchọrọ wepụ naanị otu faịlụ ma ọ bụ abụọ, họrọ nke mbụ wee pịa wepụ), na windo na-esonụ, setịpụ ụzọ mmịpụta.
5. A na-edozi ọnọdụ ndabara maka ịmịpụta otu ebe dị ugbu a nke faịlụ .rar. Gbanwee ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma pịa Ọ DỊ MMA ịmalite usoro ntinye.
ike jikọọ na windo melite ọrụ
Mara: Filesfọdụ faịlụ .rar na-echebe paswọọdụ, a ga-ajụ gị ka ịbanye ya iji mepee faịlụ ma ọ bụ wepụ ọdịnaya ya.
igwe okwu anaghị arụ ọrụ windo 10 update
Oge mmịpụta ahụ dabere na ọnụọgụ faịlụ, nha ha, yana yana ụdị PC gị ruo n'ókè ụfọdụ. Wepụ a .rar faịlụ nwere ike ọ bụla si a di na nwunye nke sekọnd na ọtụtụ minit. Ọzọkwa, ọ gaghị adị gị mkpa imeghe faịlụ RAR na 7-zip oge ọzọ aka, ka ịpị ịpị faịlụ abụọ .rar ga-emepe ya na ngwa kwesịrị ekwesị!
Anyị na-atụ anya na isiokwu a nyere aka ma nwee ike emeghe faịlụ RAR na Windows 10 enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ aro mgbe ahụ nweere onwe gị iru eru iji ngalaba nkọwa.
inyocha akwụkwọ maka mmelite emelitere
windo 10 kiiboodu anaghị ede mkpụrụ edemede
esi edozi windo 10 ngwa anaghị emeghe
windo 10 Bluetooth na-efu site na etiti center
taskbar-adịghị arụ ọrụ windo 10 mgbe update
windo 10 melite na-amalitegharị